Malunga nathi-HEYPACK CO., LIMITED
I-PET evuthela ibhotile
Impompo yebhotile yePET
Ibhotile ye-PET eneekepusi
Shampo & ibhotile yokhathalelo lomzimba
ishampu kunye nebhotile yokuhlamba
usana kunye nenyanga
Ityhubhu yokupakisha izithambiso
Ibhotile engenamoya kunye neAcrylic Cream jar
Ingqayi yeplastiki kunye nesirinji yobuhle
PET / PP / PE ingqayi
CAPS / UKUVALWA / IBHOKISI
I-HEYPACK CO., KUNOMDA
Singumenzi wobugcisa wokupakisha izithambiso.
Iqela loyilo loyilo kunye neqela elithengisayo e-Yiwu Zhejiang.
Siphupha ukuba sibe ngumthengisi wesikhongozeli sehlabathi liphela, kwaye sinikele ngenkonzo yeemveliso ezingama-10000 kwihlabathi liphela. Sinoyilo olomeleleyo noluzimeleyo lwemveliso, amaqela ophuhliso lwemveliso.
Sithatha zonke iintlobo zoxanduva, bambelela kwiphupha lethu.
Lishishini labucala eligxile kwimveliso nasekuthengiseni zonke iintlobo zephakheji kunye nezikhongozeli. Kule minyaka ili-15 idlulileyo, sinikezele ngenkonzo yephakheji yamashishini amaninzi nangakumbi. Sizinikezele ekuphuculeni inqanaba loyilo lweshishini lethu.
Iimfuno zichonga yonke into. Amaqela aphumelela kwikamva. Ukuba yingcali, ukunyaniseka, ukuyila izinto nokwabelana nabanye ngabantu yinkolelo yethu.
Ukuba ngumncedisi wokuthenga abathengi kunye nokunikezela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu zizinto ezinomdla kuthi.
I-HEYPACK iqala ukupakisha izithambiso urhwebo lwangaphandle ngo-2009. Ukuza kuthi ga ngoku i-HEYPACK inemveliso epheleleyo kunye nenkqubo yokuhambisa. Iplastiki kunye nesinyithi kunye nephepha kunye nokuqokelelwa kwezinto zoqalo, ukuvuthela ibhotile kunye nenaliti, ukulahlwa komphezulu njengokukhetha electroplating, frosting, nokukrola, ukutshiza. Ukuprintwa kwe logo njengekhusi, ukulinganisa, ukunyathela okushushu, ukuhambisa amanzi, iileyibhile. Ngaphandle koko, isampulu yasimahla, ukuthunyelwa kolwandle kwe-DDU, ukuthunyelwa komoya okungabizi mali. Ujoliso lwethu lokugqibela kukuba liqabane lakho kwishishini elithembekileyo!
Iimveliso zethu eziphambili yimibhobho ye-PE yezithambiso, iityhubhu ezenziwe nge-aluminium-plastiki, iibhotile ze-PE kunye ne-PET, iibhotile ezingenamoya kunye neebhotile zekrimu, iglasi kunye neebhotile zealuminium, ukwenza kunye nokupakisha iziqholo.
Siye sanikezela ngesikhongozeli esisebenza ngokusulungekileyo.
Singabancedisi bokuthenga abathengi abaqeqeshiweyo.
- Lo ngumsebenzi onengqondo yokuphumelela.
Sijonge phambili ekusebenzisaneni nani ngokunyanisekileyo.
I-Rom 1606, iBhlokhi A, iShuguang yeZakhiwo zamazwe aphesheya ezingama-300 zeShangcheng Avenue, iSitalato iFutian, isiXeko i-Yiwu, kwiPhondo laseZhejiang.